Rhoqo kunoko, singena kwisiza sokwandisa iitemplate okanye ukwakha iitemplate zephepha elitsha lokufika, kwaye sifumanisa into embi. Sisoloko sifumana umxholo owenziwe kakuhle, oxhaswe kakuhle othengwe njengesiseko sesiza emva koko walungiswa kakhulu yiarhente yabathengi bangaphambili.
Izihloko zomntwana ziqheleke kwangaphambili kunye nomxholo womzali kwaye zithiywe emva komxholo kunye noMntwana kuyo. Ukuba umxholo wam ngu IAvada, Umxholo womntwana ubizwa ngokuba ngu-Avada Child kwaye uqulethwe kwi umntwana we-avada ifolda. Ayisiyoyona ndibano ibalaseleyo yokuqamba amagama, ke siyibiza ngokutsha umxholo kwifayile ye-style.css, sayiza igama elitsha kwifolda emva komthengi, kwaye ke ubandakanya umfanekiso-skrini wokugqibela, owenzelwe indawo. Senza ngokwezifiso iinkcukacha zeshiti lesitayile ukwenzela ukuba umthengi achonge ukuba ngubani owakhe ngexesha elizayo.
ukuba Umxholo wezingane ayifakwanga, usenokwenza enye. Umzekelo woku ngumxholo womntwana esiwenzele iarhente yethu. Sathiya umxholo Highbridge 2018 emva kwendawo yethu kunye nonyaka ophunyezwe ngayo kwaye wabeka umxholo woMntwana kwifolda nye-sibhozo. Ishidi lesitayile seCSS lahlaziywa ngolwazi lwethu:
/ * Igama lomxholo: Highbridge Inkcazo ka-2018: Umxholo womntwana we Highbridge ngokusekwe kumxholo wombhali we-Avada: Highbridge
URI yombhali: https://highbridgeconsultants.com Template: Avada Version: 1.0.0 Text Domain: Avada */
Uqeshe iarhente ukuba ikwakhele indawo, kwaye bazalisekise Umxholo woMzali oxhaswe kakuhle kunye noMxholo woMntwana oqheleke kakhulu. Emva kokuba indawo ikhutshiwe kwaye uyigqibile ikhontrakthi, i-WordPress ikhupha uhlaziyo olungxamisekileyo olulungisa umngxunya wokhuseleko. Uhlaziya iWindowsPress kwaye indawo yakho yaphukile okanye ayinanto.
Ukuba iarhente yakho ibiyihlelile Umxholo womzali, uya kulahleka. Nokuba ufumene umxholo woMzali ohlaziyiweyo, kuya kufuneka uyikhuphele kwaye usombulule naluphi na utshintsho lwekhowudi ukuzama ukubona ukuba loluphi ulungiso olulungisa umba. Kodwa ekubeni iarhente yakho yenze umsebenzi omkhulu kwaye yaphuhlisa Umxholo wezingane, ukhuphele uhlaziyo oluhlaziyiweyo Umxholo womzali kwaye uyifake kwiakhawunti yakho yokubamba. Hlaziya iphepha nayo yonke into iyasebenza.